कोरोनाबारे सर्वप्रथम चेतावनी दिने डा. ली वेनलियाङले मृत्युपछि पाए बहुमूल्य गिफ्ट – live 60media
कोरोनाबारे सर्वप्रथम चेतावनी दिने डा. ली वेनलियाङले मृत्युपछि पाए बहुमूल्य गिफ्ट
काठमाडौं। कोरोनाभाइरबाट फैलिन सक्ने सम्भापिवत महामारीबारे सबैभन्दा पहिले चेतावनी दिने चीनको वुहानका डा. ली वेनलियाङले कोरोनाभाइरसकै कारण ज्यान गुमाए । उनले ज्यान गुमाएको ५ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । अहिले आफ्नो मृत्युको ५ महिनापछि डा. लीले बहुमूल्य गिफ्ट पाएका छन् । मृत्युपर्यन्त उनी पिता बनेको बीबीसीले जनाएको छ।
उनकी पत्नीले छोरालाई जन्म दिएकी छिन् । उनकी पत्नीले चिनियाँ सामाजिक संजालमा छोराको फोटो शेयर गर्दै यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । डा. लीकी पत्नी फू झुएजीले सामाजिक संजालमा फोटो पोस्ट गर्दै यो डा. लीको तर्फबाट आफूले पाएको अन्तिम उपहार भएको बताएकी छिन् । कोरोनाभाइरसबारे जानकारी दिने डाक्टर लीले यसको खतराको पूर्वानुमान गरिसकेका थिए । यद्यपि विश्वलाई यसबाट बचाउने प्रयास गर्दागर्दै डा. ली आफैं संक्रमित भए र गएको फेब्रुअरी ७ मा उनको मृत्यु भएको थियो ।
डा. लीलाई कोरोनाभाइरसको खतराबारे विश्वलाई जानकारी दिने ‘ह्वीसलब्लोअर’ मानिन्छ । तर, सुरुमा चीन सरकारले उनको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन । चीन सरकारले पछि डा. लीको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु आफ्नो गल्ती भएको भन्दै माफी पनि मागेको थियो ।
← लकडाउनले गर्दा श्रीमान बिदेशमा रोकिए, नेपालमा श्रीमती र छोराछोरि सबैलाई पहिरोले बगायो, आमाछोरीको शव भेटियो छोराको भेटिएन ! (घटनास्थलमा देखिएका केहि तस्विरसहित)
गफ हानेको होइन, ढुक्क रहौं मुलुक बन्छ : प्रधानमन्त्री →